Ukuthandana kwikhompyutha, iingcebiso kumantombazana
Awudingi ukucinga ngokuthandana kwe-intanethi njengendlela kuphela, okanye ngakumbi, njengokuba "ithuba kuphela". Musa ukuzondla ukuzikhukhumeza, ukuqinisekiswa ukuba baqhelana a) kuphela izilumko, b) ezizizidenge eziqingqiweyo ezineziphulo zenye iingxaki ezingaphezulu, iimpawu kunye nezinye izinto. Kodwa ngelo xesha, akunakuqonda ukuba uzikhanyele ithuba lokuba iindlela zonxibelelwano zanamuhla zisinike zona. Kwi-intanethi esiyisebenzayo, sifunda, siyavuya - ngenxa yoko sichitha ixesha elininzi. Kwaye, njengoko kuyaziwayo, ngexesha lokufunda, umsebenzi okanye ukuzilibazisa abantu bayazi ngokuqhelekileyo kwaye banokufumana iziphumo ezifanayo. Ngoko, umxholo wendaba yethu yanamhlanje uthi "Ukutshata kwikhompyutha, iingcebiso kumantombazana."
Ngoko, iingcebiso zethu kumantombazana:
1. Khetha wena-thabatha ifoto yakho ngokukhawuleza kwi-avatar. Ngakolunye uhlangothi, inyanisekileyo. Kwesinye - akukho nto yokunyusa. Kunokwenzeka ukwenza ngekiti, ibhabhathane okanye intyatyambo, kwaye ufake ifoto kwi-albhamu eyongezelelweyo, kuba ukuthandana kwi-intanethi akudingi nantoni na ekuqalekeni, ngoko awukwazi ukuhlala unika ulwazi oluthembekileyo malunga nawe. Okanye zizithathele umgaqo - ukuthumela isithombe kuphela, oko kukuthi, kwimeko yesivumelwano esisodwa, komnye nomnye.
2. Ukwazi i-intanethi kwinqanaba elithile elulungiselela ukuba ulindele ntoni kumntu, ingakumbi ukuba ubhalele iiveki ezimbalwa. Uvele uqhelene nendlela yokubhala kunye nekhono okanye ukukwazi ukuveza iingcamango zakho.
Ukunciphisa bonke abantu abaqhelanisiweyo kukuba, ekungabikho koqhagamshelwano oluxhamlayo, xa umntu egcinwa kuphela kwisithombe, akulula kulula ukuba uqaphele iimpawu zobuntu "owaziwayo". Hayi, kuthatha ixesha namava, ngoko kulula ukuba, kusemgangathweni, ukubeka umngcipheko kwaye ngokukhawuleza uqhube ulwalamano oluvela kwizinto eziyinyani, ukuba kukho umnqweno.
Indlela elula yokuthatha isigqibo ngokukhawuleza yintoni okuyifunayo okulandelayo. Ukuba nje u-interlocutor kwi-intanethi, ukutshintshana kweemvo kunye nokubonakala, uze ushiye njengoko kunjalo. Ekugqibeleni, iminyaka iya kudlulela, kwaye ingcamango yokuhlangana ayiyi kufika nakuphi na phakathi kwenu eentloko ezimbini. Kodwa ukuba umntu unomdla kwaye unxibelelwano naye - ngoko ke, ukuba udibanise, qhelana.
3. Eminye impawu kunye nempawu zikhona, unokukwazi ukubona oko kukuphambi kwakho. Ukuba ubeka ibha ephezulu, cima ngokukhawuleza bonke abo babhala ngeephene. Ama-Smileys awavunyelwe, ngokuchaseneyo, ngaphandle kwabo, ngokuchaseneyo, akukho ndlela-emva koko, awukwazi ukubona ubuso buso. Kwakungafanelekanga ingqwalasela yakho (ngaphandle kokuba izisongelo) zilabo abajikelezayo, bengamazi mncinane, ngaphandle kokuqonda intetho yakho kunye nomoya. Ingqungquthela kufuneka ibe yinto emangalisayo, kwaye ingabangeli umdla.
4. Olunye ulwazi malunga nalo mfana onokuyihlola, ukuba uyazi malunga nesayithi ledayari. Kwiiforam kunye namaziko okuthandana, abaninzi balaphulaphuli abazami ukuqhubeka, kodwa balwela ukuxhamla okukhawulezayo kunye nokukhawuleza. Kwi-diary entries kulula ukuba uqonde ukuba ingaba into ikukufutshane okanye ayikho. Ziziphi iindawo ozozifunda kuzo zombini kwaye uza kuthetha ngazo ngobomi bokwenene?
Ngaphambi koko, zama ukuqonda ukuba ngubani na ongaphambi kwakho. Ungalibali ngokukhuseleko lwakho, lumkisa umntu kwiintsapho zakho - apho uya khona kunye naye. Mamela intliziyo yakho - akufanele uhambe ukuya kwintlanganiso uze uqhelane nomntu, ukuba kukho into ekutshilo kwangaphambili - "yonke into ilungile, kodwa kungekhona loo nto."
Ngomzuzu (usuku, ihora) lokuphuhliswa kobuchule ungabhekana nobunzima. Ukusebenzisa iseshoni enye yoqhagamshelwano, akunakulula ukufunda enye ngelo xesha. Ukongeza, ibinzana elithi "awunjalo nakwi-Intanethi" akunakunceda kodwa i-alarm. Kuyacaca ukuba kwinethiwekhi wonke umntu ukhuluma ngendlela enye okanye ngaphantsi kweemaski.
5. Kukho nemini "engabonakaliyo", nangona le nto imangalisa, kodwa ezinye zikhetha ukuhlala ziyimfihlelo kuze kube ngumzuzu wokugqibela. Ukuya entlanganisweni enjalo, zama ukungaxilisi kwangaphambili, ngoko uya kuba nokuncincika okulindelekile, kuba kufuneka uqonde ukuba amantombazana athandwayo kwi-intanethi ahlale ezisa i-horse kwihashe elimhlophe.
6. Musa ukulinda iintyatyambo. Ulwalamano olungqinileyo alunalo uthando olukhethekileyo, kwaye ngokuqhelekileyo abantu abaselula abakucingi nje ngeenkcukacha.
Unokuyilumkisa ukuba nakusihlwa i-interlocutor ye-Intanethi isetyenziswe ngokukhawuleza. Yenza isaphulelo kwintloni, oku kwenzeka kwakhona. Kubi kakhulu ukuba umntu onolwazi olutsha, ngokuchaseneyo, akwazi ukuphulaphula konke, kwaye uyazi nokuba neendlela zokuthabatha.
7. Ubuninzi kunye nokungakhathaleli - iintshaba zolwazi lwazo nayiphi na, kungekhona okoqobo. Akukho nto enokuyenza, xa ekugqibeleni ungathandi. Ngoko ukuba utshintshiselwano lweefowuni aluzange kwenzeke kwaye ubekwa kwizithuthi zikawonke-wedwa wedwa, kufuneka ubeke ukuyeka.
Ukuphazamiseka kwenzeka, akuthethi ukuba ubomi bonke bubunzima / buphelile / buye njalo njalo. Unolwazi oluninzi "lwaba nolwazi" emva kwentlanganiso yokuqala. Kwaye ngelo xesha, ezininzi izibini zivavanywa ixesha, omnye umntu wadala intsapho kwaye wakhulisa abantwana, kwaye konke kwaqala ngeenkcukacha ezilula.
Yikholelwa ukuba ukuba ufuna ngokwenene ukufumana umntu, ngoko, kunokwenzeka ukuba, umntu onokuphikelela okuncinci, uyakucinga, kwi-intanethi okanye cha. Ngoku uyazi ukuphandana kwe-Intanethi, iingcebiso kumantombazana, sinethemba lokuba baya kukunceda.
Imiba emihlanu yabasetyhini
Amaqhinga amabhinqa, umhla wokuqala
Indlela yokuncoma umntu ngokufanelekileyo
Intsapho ixabana kunye neendlela zokuzinqoba
Ukuphakama kwinqanaba lomthando: kubhala unobhala kumfazi
Inhlanhla ebomini bakho
Umfazi kufuneka abe yingqiqo kwaye usemncinci
I-NLP yothando: i-5 imithetho ephambili yeprogram yabantu
Ikhofi yaseIreland: imbali kunye nokupheka
I-Steak esithambo kunye neoli eluhlaza
Isitshalo seqanda nge mozzarella
Ngowiphi iminyaka ubudala owonwabileyo ngowesifazane?
Indlela yokuhlobisa igumbi lokulala lamaphupha akho: 3 amabhunga ehlabathi jikelele
ITiramisu ephuma kwi-rhubarb, i-strawberry kunye ne-tshokoleta
I-Metallotherapy: izakhiwo zonyango zensimbi
Konke malunga neepilisi ze-Lindax
Ingulube shish kebab kwi-grill kunye nobusi, i-orange kunye nelayisi
Iindlela zokupheka ezininzi zokupheka izitya ezinomzimba
Iimpawu zezinwele ezithandanayo zanamhlanje ziyaziwayo
UPolina Dibrova wamangaliswa yindandatho yezidlo ezidliwayo
Iingxaki ngamehlo, esihlala siqwalasela ngawo
I-chic yaseParis: iimfihlelo zangaphakathi "zaseFransi"
Ukugcinwa kwexesha elide lokutya ekhaya